Gbasara Anyị | Sichuan Groupeve Co., Ltd.
Ozi Anyị: Ka anyị nwee anwụ.
Anyị Vision: Ebe anwụ na-acha, e nwere Groupeve.
Valkpụrụ Anyị: Mmezu nke ndị ahịa, ịkwụwa aka ọtọ na ntụkwasị obi; Mepee ọhụụ ma gbalịa ịdị mma.
Batsa ahụ n’anwụ na-eme ka ahụ́ gbasie anyị ike.
Anyị na-anọdụ n'ọfịs sara mbara ma na-enwe mmetụta nke anwụ na-acha ọhụrụ ma na-enwu gbaa ka ọ na-agafe na iko ahụ, anyị na-amalite ụbọchị ọrụ na-amị mkpụrụ. Enweghị mkpa ichegbu onwe gị banyere okpomọkụ na nhụjuanya anyanwụ, n'ihi na ụlọ ọrụ Groupeve mepụtara akwa ahụ, nke nwere ike ọ bụghị naanị igbochi ọkụ siri ike na ụzarị ultraviolet kamakwa ọ nwere ike ibunye ìhè, ventilet, mkpuchi-okpomọkụ, chekwaa ohere ma hichaa ngwa ngwa, ọ bụ ya mere na anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọhụụ na-enweghị ọhụụ na ọmarịcha anwụ na ụlọ ọrụ niile.
Mgbe Agha Worldwa nke Abụọ gasịrị, kpo oku, ikuku ikuku, oriọna ndị na-egbuke egbuke, uko ụlọ jikọtara ọnụ na-ewu ewu na ụlọ, mana ụlọ ọrụ ndị a metụtara ọkụ ọkụ, yabụ ụlọ ọfịs nwere mgbidi na-egosi na 1950s. Ha nyere echiche sara mbara na-enweghị mgbochi, nke kwalitere mmepe nke ọfịs odida obodo na 1960s. Na 1958, Mies na Johnson jikọrọ ụlọ 38-New York Seagram Building nwere mgbidi mkpuchi iko, kemgbe ahụ, ụlọ ndị nwere mgbidi iko na-arịgo elu ụwa niile. Ihe nrịba ama nke nwere ike ịbawanye ọkụ dị mma na igbochi ụzarị ultraviolet abụrụla elebara anya.
Maazị HEHJ nke Groupeve enyochaala ma nyochaa ụdị ngwaahịa anwụ na-achagharị agba n'ụwa niile, n'ikpeazụ ọ chọtara akwa a nke zutere ụkpụrụ ya niile. Na 2001, Groupeve webatara ọtụtụ ngwa ọrụ Teslin, teknụzụ Telewala pụrụ iche na-eme ka ngwaahịa ahụ nwee ọtụtụ elele, ịkpọ aha ole na ole, ndụ ọrụ ogologo, dị mfe ihicha, nnyefe dị elu na ọtụtụ nhọrọ obosara. Ndị na-emepụta ákwà mgbochi ma ọ bụ ndị na-agba mkpuchi nwere ike ịhọrọ obosara site na 1.83m / 2m /2.5m / 3m, nke nwere ike belata mbibi ma chekwaa ụgwọ. Nchịkwa siri ike na-eme ka ngwaahịa Groupeve nweta ọnụọgụ 98%, na-ezere akwa mkpofu n'ihi ntụpọ.
Na mbido, ejiri akwa fiberglass na PVC mee akwa akwa ahụ, mgbe afọ atọ nyochachara; Groupeve jiri polyester dochie eriri iko iji nweta ngwaahịa ọhụrụ, nke nwere arụmọrụ ka mma yana ọnụ ala. Achọpụtara ngwa ngwa site na ahịa ụwa.
Ka ọ dị ugbu a, Groupeve emepụtawo ihe karịrị ụdị 2000 nke ụdị mkpuchi mkpuchi ihu, nke a na-ebupụ na mba 82 gburugburu ụwa. Ọtụtụ ụlọ ụlọ ọrụ iko ahọrọla ngwaahịa Groupeve.
Rụọ ịhụnanya ma nwee anwụ site na ngwaahịa Groupeve.